Imfonomfono/Whatsapp/Wechat/Telegram:+86 18858875050 I-imeyile: fangyongmachine@gmail.com
Umatshini woShicilelo weFlexo
Umatshini Wokwenza Ingxowa Yenkunkuma
Umatshini wokwenza iiglavu
Umatshini wokwenza imaski
Umatshini wokwenza isingxobo
Umatshini wokwenza isigqubuthelo sesihlangu
Umatshini wokwenza iShower Cap
Icala lokutywina iZiko lokutywina elisezantsi lomatshini wokutywina
Yintoni inkqubo yokwenziwa komatshini wokwenza ingxowa yenkunkuma?
1.Qalisa i-motor ephambili, sebenzisa isantya esiphantsi, uze ulungelelanise ulawulo lwendawo yecala ukuze unciphise ifilimu kwindawo ephakathi. Lungisa i-nip rollers yasekhohlo nasekunene ukulungelelanisa iifilimu zasekhohlo nasekunene, kwaye uhlengahlengise iirola zangaphambili nasemva ukuze zilungelelanise iipateni. Lungisa...
Iingxaki ezininzi eziqhelekileyo zomatshini wokwenza ibhegi kunye neendlela zokuthintela
Umatshini wokwenza ibhegi ngumatshini owenza ukupakishwa kweplastiki ezahlukahlukeneyo okanye ezinye iingxowa zokupakisha izinto, kwaye uluhlu lwayo lokucubungula bukhulu obahlukeneyo beplastiki okanye ezinye iingxowa zokupakisha zezinto ezinobunzima obahlukeneyo kunye neenkcukacha. Ngokuqinisekileyo, kwinkqubo yokusetyenziswa ...
Imvelaphi yokuvelisa umatshini wokwenza ingxowa yenkunkuma
Umatshini wokwenza ingxowa ngumatshini owenza zonke iintlobo zeengxowa zokupakisha zeplastiki okanye ezinye iingxowa zokupakisha eziphathekayo. Uluhlu lwayo lokucubungula ubukhulu obahlukeneyo kunye nobukhulu beplastiki okanye ezinye iingxowa zokupakisha eziphathekayo. Ngokubanzi, iingxowa zokupakisha zeplastiki zizinto eziphambili ...
Inkqubo eqhelekileyo yomatshini wokwenza ingxowa engalukiweyo
ngu admin nge 21-06-02
Iingxowa ezingezizo ezilukiweyo ngokuqhelekileyo zisebenzisa inkqubo yokuprinta kwesikrini, edla ngokubizwa ngokuba yi "screen printing", ehlala iyinkqubo eqhelekileyo yokushicilela kubakhiqizi abaninzi. Kuba ngokuqhelekileyo kushicilelo lwezandla, kwaye umbala wenkqubo akukho lula ukuwulawula, njengoko abathengi...
Xa usebenzisa umatshini we-slitting ukuvelisa, inkqubo yokuqhawula kufuneka ihlawulwe ingqalelo kwaye akufanele ithathwe lula.
ngu admin on 20-10-15
Xa usebenzisa umatshini we-slitting ukuvelisa, inkqubo yokuqhawula kufuneka ihlawulwe ingqalelo kwaye akufanele ithathwe lula. Ngoko ke, eli nqaku liza kudibanisa ifilimu edibeneyo ye-BOPP / LDPE edibeneyo, iingxaki ezisemgangathweni ezenzeka kwinkqubo yokuvelisa i-slitting kunye ne-pr ehambelanayo ...
Ukulawula ubushushu bokusika ubushushu ngexesha lokwenziwa kweengxowa
Kwinkqubo yokwenza isikhwama, ngamanye amaxesha ukutywinwa kwengxowa akukuhle kakhulu. Iimveliso eziveliswa ngolu hlobo azifaneleki. Yintoni ebangela le nto? Kufuneka sinikele ingqalelo kwiqondo lokushisa lokusika ubushushu Kungeniswa ukulawula ubushushu be-cutter ngexesha lokwenziwa kwengxowa, ukuba ubushushu abukho...
Kutheni ubude bebhegi buhluke ngexesha lokwenziwa kweengxowa?
Kwinkqubo yokwenza isikhwama, ngamanye amaxesha ubude beeplastiki ezigqityiweyo zihluke. Iimveliso eziveliswa ngolu hlobo azifaneleki. Yintoni ebangela le nto? Sifanele sinikele ingqalelo ekusebenzeni okufanelekileyo komatshini wokwenza ingxowa kule miba ilandelayo ukuthintela olu hlobo...
Ezantsi kweHengtang River Industrial Area, Yaru Village, Shangwang Street, Ruian City, Zhejiang Province, China